ဆိုလာတပ်ဆင် အသုံးပြုမည့်သူတွေ ဂျင်းမမိစေဖို့ သိထားရမည့် အကြောင်းအရာများ – Wun Yan
ဆိုလာတပ်ဆင် အသုံးပြုမည့်သူတွေ ဂျင်းမမိစေဖို့ သိထားရမည့် အကြောင်းအရာများ
Solar system တစ်ခုဟာ watt ချင်းတူရင် မီးစက်တစ်လုံးဝယ်သုံးတာထက် ပိုပြီး ကုန်ကျစရိတ်များပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ရေရှည်တွက်မယ်ဆိုရင် ဆိုလာက အများကြီး တွက်ခြေကိုက်တယ်..
🟣Solar system မှာ ဘာတွေသိသင့်လဲဆိုတော့ ပထမဆုံး solar panel ပါ.. လက်ရှိ solar panel မှာ Poly, Mono, Thin film solar ရယ်ဆိုပြီး သုံးမျိုးရှိပါတယ်.. Thin film solar ကအကောင်းဆုံးဆိုပေမယ့် စျေးများတယ် အသုံးနည်းတယ်.. Satellites တွေမှာလောက်ပဲ သုံးတယ်လို့သိပါတယ်.. Poly နဲ့ Mono က အသုံးအများဆုံးပါ.. Poly က အရည်ကြိုထားတဲ့ silicon crystal ကနေထုတ်ပြီး Mono ကတော့ သန့်စင်ထားတဲ့ silicon ကနေထုတ်တယ် အလွယ်ခွဲလို့ရတာက poly ဆို အပြာရောင်အကွက်နဲ့ Mono ဆို အမည်းရောင် နက်ပြာရောင် ဆိုပြီးတွေ့ရပါတယ်..
🟣Poly solar တွေရဲ့အကွက်အရောင်တွေက မညီညာဖူး Mono ကတော့ တညီတညာထဲပါ.. Poly တွေက ရေးထားတဲ့ watt ရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း လောက်ပဲထွက်ပြီး Mono ကတော့ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိ ထုတ်ပေးပါတယ်.. စျေးကလည်း အနည်းငယ်လောက်ပိုများတယ်.. Warranty အနေနဲ့ poly ကို 15 years လောက်ပေးတယ် Mono ဆို ၂၅ နှစ် လောက်ထိပေးပါတယ်.. ဒါတောင်မပျက်စီးသေးပါဘူး.. power efficiency လျော့သွားတာမျိုးပဲ ရှိပါသေးတယ်..
🟣Mono မှာ half cell ဆိုပြီး ထပ်ခွဲထားတာရှိတယ်.. အတွင်းထဲမှာ bypass diode တွေအကြောင်းလည်း သိသင့်တယ်ဗျ.. အဲ့ diode တွေက ဆိုလာအလုပ်လုပ်အောင်ဆိုတာထက် အရိပ်ကျတဲ့အခါ ကျော်ပြီး ထုတ်ပေးနိုင်အောင်နဲ့ battery က reverse ပြန်ထွက်တာကို ထိန်းနိုင်အောင်တပ်ထားတာပါ.. diode တွေအကုန်ဖြုတ်ပြီး မောင်းရင်လည်း cell တစ်ခုမပျက်စီးရင် ပုံမှန်အတိုင်း ထွက်ပါတယ်.. တစ်ခုရှိတာက ခုနောက်ပိုင်း ဆိုလာတွေမှာ cell အတုတွေပါလာတာပါ.. အဲ့ အလုပ်မလုပ်တဲ့ cell တွေကို bypass diode နဲ့ ကျော်ပြီးပေးထားပါတယ်.. ဒီတော့ ရေးထားတဲ့ watt နဲ့ တကယ်ထွက်တာက အတော်ကြီး ကွာပါတယ်.. ဂျင်းတွေပေါ့ဗျာ..
🟣Solar ဝယ်မယ်ဆို တကယ် warranty ရှိပြီးသား brand ကိုဝယ်သုံး brand ကိုစိတ်မချရင် solar tester နဲ့ စမ်းပြီး watt ပြည့် မပြည့် တိုင်းပြီး ဝယ်တာ အဆင်အပြေဆုံးပါပဲ.. Solar cable တွေကတော့ အနည်းဆုံး ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာ သုံးရမှာဖြစ်လို့ အသေအချာရွေးဝယ်သင့်ပါတယ်.. သူက ရိုးရိုးမီးကြိုးတွေနဲ့ တပ်မရပါ.. Solar ကြိုးတွေက efficiency အမြင့်ဆုံးရအောင်ကော ရာသီဥတုဒါဏ်ခံအောင်ပါ ထုတ်ထားပါတယ်.. Copper 99% ပါတဲ့ကြိုးတွေကိုမှ အပေါ်က ငွေရည်စိမ်ပေးထားပါတယ်.. ကြိုးတွေက ငွေရောင်ပါကြေးခြစ်လိုက်မှ ကြေးရောင်ထွက်ပါတယ်.. ဒါက အလွယ်ပြောတာပါ.. ပိုပြောရင် အများကြီးရှိပါသေးတယ်..
🟣နောက်တစ်ခုကတော့ solar system မှာအရေးအကြီးဆုံး controller ပါ.. သူက နှစ်မျိုးရှ်ပါတယ် PWM (Pulse Width Modulation) နဲ့ MPPT (Maximum Power Point Tracking) controller တွေပါ.. PWM ကတော့ battery ကို ဘယ်အချိန်သွင်းမယ် ဘယ်လောက်သွင်းမယ် ဘယ်အချိန်ရပ်မယ် ဆိုတာလောက်ကို အဓိကထားပါတယ်.. PV ကနေလာတဲ့ power ကို တိုးမြင့်ပေးတာမရှိပါ.. MPPT ကတော့ PV ရဲ့ power ကို တိုးမြင့်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်.. မိုးရွာနေတဲ့ အချိန်တွေမှာတောင် power ကို အမြင့်ဆုံးရအောင် လုပ်ထားပေးနိုင်ပါတယ်.. inverter စျေးထက်တောင်ကြီးတဲ့ MPPT တွေရှိပါတယ်.. တကယ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ MPPT ကို ရွေးပါ..
🟣နောက်မှာတော့ inverter ကတော့ ပုံစံ (၃) မျိုးရှိပါတယ်.. ဒါက solar grid system နဲ့ ဆိုင်ပါတယ်.. On grid, Off grid နဲ့ hybrid ပါ..
On grid ကတော့ မီးအမြဲရတဲ့နေရာတွေ (မီးမပျက်) လျှပ်စစ်မီးရော solar ရောတွဲသုံးတဲ့ ပုံစံပါ.. Backup အတွက် battery မပါပါ.. Solar ကထွက်တဲ့ power ကပိုနေရင် main grid ပြန်ပို့ပေးပြီး (ပိုတဲ့ power ကို အစိုးရဆီပြန်ရောင်းပါတယ်) သုံးတာက solar power ထက်များရင် main grid ကနေလိုသလောက် ယူသုံးပေးပါတယ်..
Off grid ကတော့ solar ရယ် battery ရယ်ပဲသုံးပါတယ်.. မီးလာနေရင်မီးနဲ့သုံးပြီး မီးမရရင် solar ကနေသုံးတယ်.. ညဖက်လိုမျိုးဆို backup ထားတဲ့ battery ကနေပြန်သုံးပါတယ်..
Hybrid ကတော့ အထက်ကနှစ်မျိုးကို ပေါင်းထားတာမျိုးပါ.. ဒါပေမယ့် ဒီမှာက မီးပျက်တော့ မီးအားကို main grid ဆီပြန်ပို့မရပါဘူး.. ဘယ်အမျိုးအစား inverter မျိုးသုံးသုံး pure sine wave ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်.. modified sine wave ဆိုရေးထားတဲ့ watt ရဲ့ တဝက်ပဲသုံးလို့ရမယ်.. Freezer တွေ aircon တွေ motor တွေသုံးမယ်ဆို Peak Power မြင့်တဲ့ low frequency pure sine wave တွေဝယ်ရပါမယ်..
Battery မှာတော့ lead acid နှစ်မျိုး, Normal plate, tubular tall, Gel type, Calcium battery, Ni-cad (နီကယ်-ကက်), Lifepo4 ဆိုပြီးထွက်ပါတယ်..
Normal plate battery တွေက solar system မှာ သုံးမရပါဘူး.. ကျတော်တို့ဆီမှာ သုံးနေတဲ့ ကားအိုး 3K TOYO အစရှိတာတွေပါ.. ဆိုလာနဲ့သုံးရင် တစ်နှစ်ဆိုတာ အလွန်ဆုံးပါ.. Solar နဲ့ သုံးမယ်ဆို အနည်းဆုံး tubular tall ကနေစသုံးရပါမယ်.. ပြီးရင် Gel Type deep cycle တွေ Lifepo4 တွေကတော့ solar နဲ့ အသင့်တော်ဆုံးပါ.. Charge rate မြင့်သလို peak power လည်း မြင့်တယ်.. ရိုးရိုး lead acid 200A တစ်လုံးနဲ့ယှဉ်ကြည့်ရင် Lifepo4 100A တစ်လုံးက အသုံးပိုခံတယ်.. စျေးနဲ့ တွက်ရင်များပေမယ့်5years လောက် စိတ်ချလက်ချသုံးရမယ်.. ပျက်စီးခဲ့ရင်တောင် လိုတဲ့ cell တခုချင်း လဲလို့ရမယ် ဒီလိုအားသာချက်တွေရှိပါတယ်။ တော်သေးပြီ။
Written by Wai Yan
မူရင်းရေးသားသူအား လေးစားမှုဖြင့် ပြန်လည် မျှဝေပါသည်။
အိမ်ရှင်မ အိမ်ရှင်ထီးတို့အတွက် ဒီဂျစ်တယ် မီးဖိုကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ကြာရှည်ခံအောင် အသုံးပြုနိုင်ဖို့ သိထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းများ
← LED မီးသီး ပြင်နည်း
အချိုမှုန့်ထက် အဆတစ်ရာ ကောင်းပြီး ကျန်းမာရေး မထိခိုက်တဲ့ သဘာဝ ဟင်းခပ်မှုန့် ပြုလုပ်နည်း →